Malagasy (vahoaka) - Wikipedia
Ny Malagasy, amin'ny ankapobeny, dia ireo olona rehetra miaina ao Madagasikara. Ny olona tety ivelany no nanome io anarana hoe Malagasy io sy Madagasikara koa ho an'ny vahoaka malagasy sy i Madagasikara, firenena onenan'ny Malagasy. Ny teny hoe Madagasikara dia avy amin'i Marco Polo. Ny Nosin'i Madagasikara dia nafangarony tamin'ny tanànan'i Mogadiscio, any Somalia amin'izao fotoana izao, tamina sarintany.
Ny fiavian'ny MalagasyHanova
Ny ankabeazan'ny razan'ny Malagasy ankehitriny dia tonga tamin'ny lakana na botry avy any Indônezia tamin'ny taonjato faha-3 hatramin'ny taonjato faha-5. Ny amantarana ny fihavian'ny Malagasy avy any Indônezia dia ny fiteny tenenin'ny Malagasy amin'izao fotoana izao: fantatra fa misy fitovizana lehibe amin'ny fiteny sasany any amin'ny Nosin'i Bôrneô ny fiteny malagasy, indrindra eo amin'ny lafiny voambolana ampiasaina : rehefa manonona ny volana izao ohatra, ny fiteny indôneziana (Bahasa Indonesia) dia mampiasa ny teny hoe Bulan sy ny teny javaney hoe Wulan, mitovitovy fanononana amin'ilay teny malagasy, saingy ny fomba fanoratana fotsiny no miova.
Ny Malagasy koa dia manan-drazana avy any Afrika atsinanana sy Arabo, ka ny amantarana izany dia ny endrik'ireo Malagasy tandrefana sy tavaratra. Ny endriky ny foko mipetraka any Afrika atsinanana dia mitovy amin'ny Afrikana miaina eo amin'ny kontinenta afrikana. Ny fihavian'izy ireo ao Afrika dia eo amin'ny tontolo soahily nentina ho andevo eto Madagasikara na nifindra monina.
Ny foko eto Madagasikara dia miisa valo ambin'ny folo. Misy ny foko manana endrika aziatika kokoa, ny foko sasany manana endrika afrikana. Kanefa ny fitenin'izy ireo dia tsy dia samihafa loatra amin'ny hafa ka manana voambolana iraisana ; ka noho izany dia mifankahazo fiteny ihany ny Malagasy avy amin'ny foko roa samihafa na dia tsy mitovy tanteraka aza ny fiteny. Ny teny malagasy ofisialy dia mampiasa ny voambolan'ny fiteny merina miaraka amin'ny voambolana iraisan'ny fiteny malagasy rehetra.
Ny foko eto Madagasikara dia vondron'olona isan'ny vahoaka malagasy izay heverina fa iray faritra niaviana, nanana fandaminana ara-politika iraisany na nitoviany tamin'ny vanimpotoana faha mpanjaka, manana ny fomba fitenenany ny teny malagasy izay atao hoe fitenim-paritra. Mahazatra ny maro ny miteny hoe "foko valo ambin'ny folo" na dia mety tsy mifanandrify amin'ny tena marina izany. Tsy singa amaritana ny atao hoe "foko" eto Madagasikara na ny fihodirana, na ny toetran'ny volo, na ny toe-batana.
Tsy nisy ezaka fampiraisana ny foko eto Madagasikara raha tsy tamin'ny taonjato faha-19, taona maromaro talohan'ny fanjanahantany, ny foko nanitatra ny fanjakany midadasika indrindra teto Madagasikara talohan'ny fanjanahantany tamin'ny taona 1896 dia ny foko merina, avy any Indônezia, ka ny fanjakana dia mitondra ny anarany hoe Fanjakana merina.
Ireto ny foko malagasy sasany: ny Antefasy, ny Antemoro, ny Antesaka , ny Antankarana, ny Antambahoaka, ny Antandroy, ny Antanosy, ny Bara, ny Betsimisaraka, ny Betsileo, ny Bezanozano, ny Mahafaly, ny Merina, ny Sakalava, ny Sihanaka, ny Tanala, ny Tsimihety ary ny Zafisoro.
Ny fiteny malagasy dia fiteny ao amin'ny sampana aostrôneziana, avy any Azia atsimo atsinanana. Ny fiteny malagasy tamin'ny fahatongavany teto Madagasikara dia nindrana teny avy amin'ny fiteny soahily, fiteny banto mifangaro amin'ny fiteny arabo, fiteny iray nitondra voanteny maro amin'ny fiteny malagasy toy ny anarana ampiasaina amin'ny fanandroana, ary betsaka tamin'izy ireo no nogasiana ary lasa teny fampiasa amin'ny teny malagasy ankehitriny. Ny fiteny frantsay sy ny fiteny anglisy indray dia nitondra ireo voambolana ara-teknika toy ny teknika, ny jeografia, ny jeolojia, ny solosaina sns.
Tsy dia ranoray ny teny malagasy. Ny teny malagasy ampiasaina amin'ny fandraharahana sy atao hoe "teny malagasy ofisialy", amin'ny ankapobeny, dia avy amin'ny fiteny merina taloha.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Malagasy_(vahoaka)&oldid=1013237"
Dernière modification le 2 Aogositra 2021, à 10:43
Voaova farany tamin'ny 2 Aogositra 2021 amin'ny 10:43 ity pejy ity.